ကိုရုပ်ဆိုး ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ: November 2008
မူးမူးနဲ့ရေးတဲ့ ”မ” ကဗျာ
ညီငယ် မောင်မျိုးနှင့် မောင်ပိစိသို့
ကိုရုပ်ဆိုးတို့ နိဗ္ဗာန်ဈေး .......... တဲ့
”မ”ကဗျာကို ... ပိစိရဲ့ “လ”ကဗျာကို အားကျလို့ ရေးလိုက်တာပါ။
မောင် …. ရေ
မောင် … ရေ
မိုးပေါ်က လကို တိုင်တည်လို့ …။
မောင် … ကတိပေးခဲ့တာကော …။
မေ့ … ကို လက်ထပ်ဖို့
မောင် .. ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီး
မေ့နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း …
မေ လေ …. အခုတော့ …
မေ … နေတတ်အောင်
မေ … အသားကျအောင်
မေ … မုန်းမေ့နိုင်အောင်
မေ လေ ….. မာန်တင်းလို့
မဟာစည်မှာ … သီလရှင် ၀တ်ခဲ့ပြီကွယ် …….. :)
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ6း:28 PM3ထင်မြင်ချက်(များ)
မောင်မျိုးလေး ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်။ အဝေးပြေးဂိတ်မှာ သွားရောက်ကြိုတာက မောင်ပိစိတို့အဖွဲ့။ ကျနော်နှင့် ချိန်းတယ်။ ညနေ ရုံးဆင်းရင် တွေ့နိုင်မယ်လို့ အကြောင်းကြားထားပေမယ့် ........ တကယ်တမ်းကျတော့ ဧည့်ဝတ်မကျေပွန်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကို မကျေနပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ရောက်တဲ့နေ့က အိမ်မှာ လိုက်အိပ်ပေမယ့် .... ကျနော့ရဲ့ ကိစ္စအ၀၀ကို မညည်းငြူပဲ လိုက်ပါခဲ့တဲ့ မောင်မျိုး ..... အစ, အဆုံး ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ခဲ့တဲ့ မောင်ပိစိ ....။
စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ ....... မနေ့က သူတို့နဲ့ ဘီယာသောက်ကြမယ်ဆိုပြီး ချိန်းထားပေမယ့် ... ညနေစောင်းရောက်တော့ ပြသနာကပေါ်လာပြန်ပြီ ... ဘန်ကောက်မှာ ဆူပူကြလို့ လေဆိပ်ပိတ်လိုက်တာ ရောက်မယ့်ဧည့်သည်တွေလည်းမရောက်၊ ပြန်ရမယ့် ဧည့်သည်တွေလည်း မပြန်ရ ..။ မလုပ်မနေ အလုပ်ကိစ္စဆိုတော့ သူတို့ ဖုန်းဆက်ချိန်းတော့ ဖျက်လိုက်ရတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တောင်းပန်ပြီး ဖျက်ရမှန်းမသိပေမယ့် ... သူတို့ (မောင်မျိုးနှင့် မောင်ပိစိ)က အလိုက်သိစွာနဲ့ အလုပ်ကိစ္စဆိုတော့ ကျနော်တို့ နားလည်ပါတယ်တဲ့ ...။
(မောင်မျိုးဘလော့ဂ်မှာ သူတို့ ပျော်ကြတာတွေကိုတွေတော့ ၀မ်းနည်းမိတယ်။)
ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အခိုက်မှာ ဧည့်ဝတ်မကျေပွန်လိုက်တဲ့ အကိုရုပ်ဆိုးကို နားလည်ပေးပါ မောင်မျိုးရေလို့ ... အကို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကနေပဲ တောင်းပန်လိုက်တယ်ကွာ။ ပိစိကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား11:26 AM2ထင်မြင်ချက်(များ)
အညွှန်း : သူငယ်ချင်း
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကျနော့သူငယ်ချင်း ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအတွက် လက်ဖွဲ့ပေါ်မှာ ကျနော် ရေးပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ ..။ တင်မယ် ... တင်မယ်နဲ့ မအားလပ်တာနဲ့ ဒီနေ့မှပဲ တင်ဖြစ်တော့တယ်။
သူငယ်ချင်းတို့နှစ်ယောက် ဘ၀ခရီးလမ်းမှာ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး ကြင်နာခြင်းများစွာ၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းများစွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း .........
ကမ်းလင့်ခဲ့ ထွဋ်ခေါင်ဆိုသို့ ....
လှမ်းရဲလား မေ ရေ
ဟိုး ..... အမြင့်
ပျော် စံ ရာ ဆီသို့ ....။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား12:52 PM2ထင်မြင်ချက်(များ)
အညွှန်း : ကျနော့ ကဗျာ, သူငယ်ချင်း
နိဗ္ဗာန်ဈေးတဲ့ …. ဒီနာမည်စပေးတဲ့ကာလကို မသိသလို၊ မည်သို့သောအကြောင်းကြောင့် ဤသို့ပေးသည်ကိုလည်းမသိ၊ မသိတာကို ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် … အမည်က အဓိကမဟုတ်၊ အဲ့ဒီ နိဗ္ဗာန်ဈေးမှာ ဘာတွေလုပ်လည်းဆိုတာပဲ သိလို့ ပြောပြချင်တာကိုး…။ ကျနော်တို့ တာမွေမြို့နယ်၊ အရိုးကုန်းရပ်ကွက်၊ ၁၄၆-လမ်းမှာ နိဗ္ဗာန်ဈေးကို လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့တိုင်း စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်လာခဲ့တာ ယခုဆိုရင် (၉)ကြိမ်မြောက်တောင် ရှိခဲ့ပြီ။ လူငယ်တွေဦးစီးပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်လာခဲ့တာလေ။ ကဲ … နိဗ္ဗာန်ဈေးမှာ ဘာတွေလုပ်လည်း … သိတဲ့လူတွေ ရှိသလို၊ မသိတဲ့လူတွေလည်း ရှိမှာပဲလေ။
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ (ဒီနှစ်အတွက် ၁၂-နိုဝင်ဘာလ-၀၈)၊ မနက်ပိုင်းမှာတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ သက်ကြီးအဖိုးအဖွားတွေကို တစ်အိမ်တစ်ခွက်ပို့တဲ့ ထမင်းနဲ့ ဟင်းကို ကျွေးမွေးတယ်။ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်တယ်။ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ကြတယ်။ ညနေစောင်းတာနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက လူငယ်တွေက ရေစည်လှည်းတွေတွန်းကာ လမ်းတစ်လမ်းလုံးသန့်ရှင်းသွားစေရန်အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် မမောမပန်းနိုင် ဆေးကြောကြတယ်။ သံဃာတွေ လျှောက်မယ့်လမ်း ဆူးညှောင့်ခလုတ်တွေ မရှိအောင်လို့ပါ။ ညနေ (၄)နာရီလောက်မှာ အရိုးကုန်းရပ်ကွက်ရဲ့ ပင်တိုင် ဆွမ်းခံကြွနေကြ ဆုထူးပန်ကျောင်းတိုက်မှ သံဃာအပါး (၁၂၀)ကျော်ကို အိမ်တိုင်း၊ အိမ်တိုင်းမှ ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ သံဃာတော်များအသုံးတည့်မယ့် ဖယောင်းတိုင် (ဒီရာသီကျော်တာနဲ့ မီးကပုံမှန်ပျက်တော့ လိုအပ်လာပြီလေ :)၊ ဆပ်ပြာ၊ ဆပ်ပြာမှုန့်၊ သွားတိုက်ဆေး၊ အကိုက်အခဲသက်သာစေတဲ့ ဒဏ်ကြေလိမ်းဆေး၊ ဆန်၊ ဆီ၊ ကြက်သွန်၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ၊ ကော်ဖီမစ်အထုပ်၊ ၀တ္ထုငွေ စသည့် အမယ်စုံလင်လှစွာ လမ်းဘေးဝဲယာ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ လူတန်းကြီးက လောင်းလှူ ကြတယ်လေ။ အဲဒီနေ့ကတော့ အဲဒီလောက်နဲ့ပဲ နှစ်သိမ့်လိုက်ကြတယ်။
နိဗ္ဗာန်ဈေးကိုတော့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့မှာ (ဒီနှစ်အတွက် ၁၃-နိုဝင်ဘာလ-၀၈) ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်။ နံနက်ကတည်းက အိမ်တိုင်း၊ အိမ်တိုင်းက လူစု လူဝေးနဲ့ ညနေစောင်းမှာ ကျွေးမွေးမယ့် နိဗ္ဗာန်ဈေးအတွက် ပြင်ဆင်နေကြပြီလေ။ လမ်းရဲ့ထိပ်မှာလည်း မည့်သည့်အိမ်က မည့်သည့်အစားအစာ ကျွေးမယ်ဆိုတာကို ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားပြီး ကြေငြာမောင်းခတ်ပြီးသား …။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နေလုံးက တိုက်တွေရဲ့အကြား ပုန်းရှောင်မလို့ လုပ်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲ တဖြည်းဖြည်းရောက်လာတဲ့ ပရိသတ်က လမ်းတစ်လမ်းလုံး ပြည့်လုပြည့်ခင်၊ ဆိုင်းဘုတ်မှာ သွားကြည့်ထားပြီးသားမို့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အစားအစာကျွေးမယ့်အိမ်ရှေ့မှာ ဟိုနားမတ်တပ်၊ ဒီနားမတ်တပ်နဲ့ စောင့်နေကြပြီ။ ချက်ပြုတ်ကြတဲ့ လူတစ်စုကလည်း ရေတောင်မချိုးအား၊ ပြီးတာနဲ့ ကျွေးဖို့ ဟန်တပြင်ပြင် …။
ကဲ …. စပါပြီဗျာ နိဗ္ဗာန်ဈေး …။ ဟေ့ … ဒီမှာ အာဟာရအပြည့် ဘဲသားဆန်ပြုတ်၊ နောက်ကျလို့ကတော့ ဘဲတွေထပျံလို့၊ ဆန်ပြုတ်သီးသန့်ပဲရမယ်လို့ အော်တဲ့လူစုကအော် ….။ ဟော့ဒီမှာ ရယ်ဒီမိတ် ကြာဇံကြော်ဆိုပြီး ဖော့ဘူးနဲ့ တခါတည်းထည့်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ကလည်း အော်ဟစ်အလုပ်ရှုပ်၊ ထမင်းနဲ့ သီးစုံပဲဟင်းရယ်၊ ငါးခြောက်ကြော်ရယ် နှစ်စဉ်ကျွေးနေကျအိမ်က လမ်းပေါ်မှာ စားပွဲခင်းပြီး တစ်ခါတည်းကျွေး။ မစွံသေးတဲ့ အပျိုလေးတွေကလည်း ထမင်းနဲ့ တခါတည်း တွဲထုတ်တော့မယ့်ဟန်နဲ့၊ ထမင်းလိုက်သလို၊ ဟင်းလိုက်သလိုနဲ့ လူလုံးပြ။ ကိုယ်လှူတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ သူလှူတဲ့ပစ္စည်းကိုလဲလှယ်ကြနဲ့ … ကျောက်ခေတ်က ပစ္စည်းချင်းလဲကြသလိုပါပဲ။ လူအုပ်ကြီးကလည်း ဒီအိမ်ကနေ ဟိုအိမ်ပြေးလိုက်၊ ဟိုအိမ်ကနေ ဒီအိမ်ပြန်ပြေးလာလိုက်နဲ့ အို … လမ်းတစ်ခုလုံး လူရောင်စုံ ဖုံးလွှမ်းနေတာပဲ။
လူတစ်ရာကျော် အသာလေးကျွေးလို့ရတဲ့ အစားအသောက်တွေက (၂)နာရီသာသာနဲ့ အကုန် ကုန်တော့တာပဲ။ ဟေး …… ဟိုအိမ်မှာ ကျန်သေးတယ်ဟေ့ဆိုပြီး ဘာမှမကျွေးပဲ ထွက်ကြည့်နေတဲ့ အိမ်ကို လက်ညိုးထိုးလို့ တမိသားစုလုံး အိမ်ထဲကို ၀ုန်းဒိုင်းကြဲပြီး ၀င်သွားလိုက်တာများ၊ လိပ်ရဲ့ခေါင်းက အခွံ့ထဲပြန်ဝင်သလိုမြန်ပ။ ဟိုးအရင် ………. သစ်သားလုံးချင်းအိမ်ဘ၀ထဲကနေ၊ ၇-လွှာတိုက် (၇-လွှာပေါက်စီမဟုတ်ပါ) ဖြစ်တဲ့အထိ နေလာကြတဲ့လူတွေဆိုတော့လည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ စိတ်ဆိုးရမှန်းမသိ။ အို .. ဒီလို လမ်းဘေးမှာ ကျွေးတဲ့ထမင်းမျိုးဘယ်တော့မှ မစားဖူးဆိုပြီး ကြွေးကျော်တဲ့လူရှိလား … လွှတ်လိုက်ပါဗျာ … ကောင်းကောင်းပြုစုပြီး ကျွေးလွှတ်လိုက်လို့ နေ့တိုင်း နိဗ္ဗာန်ဈေးတောင် လုပ်ခိုင်းနေဦးမယ်။ ၀တ္တာရားအရ ချက်တာ၊ စီးပွားရေးအရ ချက်တာမဟုတ်တဲ့အပြင် … စေတနာတွေ အပြည့်အ၀ ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်၊ အိုဗျာ … ဒီအချိန်မှာ ဟိုဟာကို ဟိုဟာလုပ်ကြွေးမယ်ဆိုရင်တောင် ကောင်းသဗျား …။
ကျနော်လား … ကိုရုပ်ဆိုးတို့အဖွဲ့ကတော့ ဘဲသားဆန်ပြုတ် အ၀ကျွေးတယ် … ပေးတယ် … ကမ်းတယ် …။ ရောင်းရင်းကော စားချင်သလား … မပူပါနဲ့ဗျာ … အဲဒါကို ကြိုသိလို့ အောက်မှာ တစ်ခါတည်းကျွေးလိုက်တယ်။
သြော် … ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ နိဗ္ဗာန်ဈေးက လက်မှတ်ရောင်းပြီးကျွေးတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဈေးမဟုတ်ဘူးဗျ။ ကိုယ့်အိမ်၊ သူ့အိမ် သိမှကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဈေးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။ မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါတတ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ဈေးလည်း မဟုတ်ဘူးဗျ။ အယုတ်, အလတ်, အမြတ်မရွေး … ဒီပန်းကန်၊ ဒီထိုင်ခုံ၊ ဒီဟင်း၊ ဒီထမင်းကို စေတနာဘုံးပေါလအောနဲ့ ကျွေးတဲ့ ဖရီး နိဗ္ဗာန်ဈေး။ မန်းနီးလပ်စ် နိဗ္ဗာန်ဈေး။ အလကားကျွေးတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဈေး။ ဒီအချိန် လူကြီးဆိုတဲ့လူ လာစားရင်တောင် အကုန်လုံးနဲ့ တန်းတူညီမျှ အကျွေးခံရမယ့် နိဗ္ဗာန်ဈေး … အိုဘယ့် နိဗ္ဗာန်ဈေးဗျ။
စာကြွင်း …. အဲဒီညမှာ လမ်းထဲမှာ လူငယ်ပွဲရှိတယ်ဗျ။ အကင်ရယ်၊ ဂစ်တာရယ်၊ ပုလင်းရယ် (အချိုရည်ကိုပြောတာပါ၊ ဘာနဲ့ရောထားလည်းတော့ စဉ်းစားဗျာ)။ သူခိုးကြီးလုပ်တမ်းကစားကြတယ်။ နိုင်ငံတော်က ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာကိစ္စများကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ဒုစရိုက်မှုများ ကျူးလွန်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤကစားနည်းအား ပိတ်ပင်လိုက်ပါသည်လို့တော့ နှစ်စဉ်ကြေငြာနေကြဗျ။ ဒီနှစ်လည်း ကြေငြာအုံးမှာပါ။ ကျနော်တို့က ပစ္စည်းတွေကို မဖွက်ပါဘူး။ စာတန်းလိုက်ချိတ်ယုံပါ။
သမီးရှင်အိမ်ရှေ့မှာ ……. “သားမက်အလိုရှိတယ်”ဆိုတာမျိုးတို့၊
အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးတွေ အိမ်ရှေ့မှာ “ငှက်ပျောတုံး ၀ယ်ရန်ရှိသည်”ဆိုတာမျိုး၊
နတ်ကတော်အိမ်က ဆိုင်းဘုတ်ကို၊ အရက်ရောင်းတဲ့အိမ်ရှေ့မှာ ပြောင်းချိတ်တာမျိုး၊
အဆဲသန်တဲ့ မိန်းမတွေအိမ်ရှေ့မှာ “ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းပေးသည်”ဆိုတာမျိုး၊
ဘုရားလူကြီးလိုလိုလူအိမ်ရှေ့မှာ “ဒီအိမ်တွင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ ရောင်းရန်ရှိသည်”ဆိုတာမျိုး၊
အခြောက်ရှိတဲ့ အိမ်ရှေ့မှာဆိုရင် “ကာယဗလသင်တန်း”ဆိုတာမျိုးတွေ ………. စတာတွေပေါ့ဗျာ။ သိထားတာလေးတွေရှိသေးရင်လည်း ဝေမျှဦးဗျာ …………..။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ3း:26 PM 1 ထင်မြင်ချက်(များ)
အညွှန်း : ထွေကာလီကာ မှတ်စု
ဒီနေ့ ကျနော့ဇနီးရဲ့ မွေးနေ့မှာ မနက်စောစော မိသားစုလိုက် ရွှေတိဂုံဘုရားသွားပြီးအပြန် ဒီကဗျာလေးအား မှတ်မှတ်ရရ ရေးဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။ ယနေ့မှစ၍ နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ သားနှင့် သမီး၊ လူမိုက်ကြီး ခင်ပွန်းရဲ့နံဘေးမှာ အသက်ထက်ဆုံး နားလည်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ နေသွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း …..
နွဲဆက်ခဲ့တဲ့ … မလေးရေ ..။
တစ်ချက်မှ နောက်မတွန့်ခဲ့တဲ့ … မလေးရေ …။
ကြင်နာမှုတွေနဲ့ ချွေးသိပ်ခဲ့တဲ့ … မလေးရေ …။
အပြုံးမပျက် ဖေးကူတဲ့လက်နဲ့ လှမ်းခဲ့တဲ့ … မလေးရေ …။
အေးအတူ၊ ပူအမျှ အတူတကွ
မင်းတို့အတွက်သာ ငါ, ဖြစ်စေရမယ် …။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား1:14 PM7ထင်မြင်ချက်(များ)
ရာမ လက်တော်က “လေး”လောက်
ငါ့ .. အချစ်ကို ပယ်ချ
ငါ့ရဲ့ ၀ဋ်ကြွေးလားကွယ် …။
၀၈-နိုဝင်ဘာလ-၀၈ (၁၂း၃၀ မိနစ်)
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား12:22 PM2ထင်မြင်ချက်(များ)
ဟဲ့ … ငါတို့က
အဖော်မကြောက်တဲ့ လူတွေပါကွယ် …။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား12:14 PM 8 ထင်မြင်ချက်(များ)
ည, ည, ဘယ်သွားနေတာလဲ
သားတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်
ကြောက်တယ် အမေရဲ့ ...”
သားတို့ကို ဘယ်လိုရှင်းရပ ...။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှာ6း:26 PM 1 ထင်မြင်ချက်(များ)
သခင်အကြိုက် လိုက်ခဲ့တာကိုက …။
၀၇-နိုဝင်ဘာ-၀၈) ၁၅း၀၁ မိနစ်
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား4:02 PM2ထင်မြင်ချက်(များ)
ဤကဗျာအား ကျနော်၏ နောင်တော်၊ ကျနော့ဘလော့ဂ်အား နေ့စဉ်ရက်ဆက် စောင့်ဖတ်ပေမယ့် ဘာမှ အသစ်မတွေ့လို့ စိတ်ညစ်နေသူ “ကိုဖြူတုတ်”အား ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စေခြင်းငှာ ... ညီတော် ”ကိုရုပ်ဆိုး”မှ တင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောင်တော် အပန်းပြေပါစေ ... ။
ထရံတစ်ချပ်သာ ကုန်ခဲ့ …။
ဗိုက်သားက မကျန် …။
အို … ရေသူမလေးရေ
လှုပ်ပြ ခဲ့ပါကွယ် …။
အစိတ်ပြား = အရက်လေးပက်ပါဝင်သော ပုလင်းပြား။
မော်လ်ဒယ် = အလေးချိန် လေးဆယ်သားအောက် ရှိသောငါးသလောက်မျိုး။ ငါးထဲတွင် မော်လ်ဒယ်ထုံးစံအတိုင်း အရိုးများ၍ ဈေးအနိမ့်ဆုံးဖြစ်။
တင်ပြသူကးကိုရုပ်ဆိုး ဒီအချိန်မှား11:17 AM9ထင်မြင်ချက်(များ)